Horudhac: Real Madrid vs Eibar… (Los Blancos oo indhaha ku haysa inay maanta gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah tartammada oo dhan) – Gool FM
Horudhac: Real Madrid vs Eibar… (Los Blancos oo indhaha ku haysa inay maanta gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah tartammada oo dhan)
Haaruun April 3, 2021
(Madrid) 03 Abril 2021. Real Madrid ayaa isha ku heysa inay ka dhigto guulaheeda afar guul oo isku xigta tartammada oo dhan marka ay sii wadayaan ololaheeda horyaalka La Liga oo ay soo dhoweynayso Galabta naadiga Eibar.
Los Blancos oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka ayaa gashay fasaxa caalamiga ah markii ay 3-1 kaga badisay Celta Vigo, halka kooxda kaalinta 19-aad ee Eibar ay ciyaartay barbaro 1-1 ah la gashay Athletic Bilbao kulankii ugu dambeeyay.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 05:15 Galabanimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Isidro Diaz de Mera (Spain)
Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in Sergio Ramos uu garoomada ka maqnaan doono muddo bil ah, isla markaana uu mugdi sii galayo mustaqbalkiisa.
Eden Hazard ayaa sare u qaaday soo kabashadiisa, laakiin ma ciyaari doono kulankaan, Dani Carvajal iyo Federico Valverde sidoo kale diyaar uma ahan kooxda martida loo yahay.
Toni Kroos ayaa shaki uu ku jiray isbuucaan soo dhammaaday laakiin waxa uu ku jiraa safka wajahaya kooxda Eibar maanta.
Marcelo ayaa la filayaa inuu waayo booskiisa daafaca bidix, iyadoo Ferland Mendy ay u badan tahay inuu noqon doono dooqa koowaad ee isbuucaan.
Rodrygo Goes iyo Marco Asensio waa inay ka soo muuqdaan kooxda martida loo yahay isbuucaan.
Xiddiga Kooxda Eibar ee Edu Exposito ayaa shaki ku jiraa dhaawac awgiis, sidaas darteed Aleix Garcia ayaa laga yaabaa inuu ku bilowdo bartamaha khadka dhexe.
Takashi Inui ayaa kulankan laga door bidi karaa labada ciyaaryahan Pedro Leon iyo Kevin, isagoo ku bilaaban kara garab midig.
Rafa Soares ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo garabka bidix ee kooxda martida ah, iyadoo Jose Angel uu weli la maqan yahay dhaawac muruqa ah.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay 16 ka mid ah 20-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay qeybta hore iyo kulanka oo dhammaystiran 10 ka mid ah 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Eibar tartammada oo dhan.
>- Los Blancos ayaa guuleystay 7 ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Kooxda Eibar tartammada oo dhan.
>- Kooxda Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan saddex gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Eibar tartammada oo dhan.
>- Eibar ayaa ku guuldarreysatay inu guuleysato 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
Horudhac: Chelsea vs West Bromwich Albion... (Blues oo doonaysa inay adkeysato kaalinteeda afaraad ee Premier League)
Horudhac: Manchester City vs Leicester City... (Kooxda kaalinta koowaad iyo tan kaalinta saddexaad ee Premier League oo caawa isku dheggan)